Cunto-celin waxay soo jeedineysaa siyaabaha loo xakameyn karo Sharafuta gudbinta Sharebutton
Sharebutton Sharciga been abuurka been abuurka ah ma ahaa mid qashin ah ee tirakoobka Google Analytics? Uma baahnid walwal. Is deji. Sharebutton.to spam gudbinta waxay u egtahay in ay u egtahay tiro wanaagsan oo ka mid ah dadka soo booqda ee dhabta ah ayaa ka soo degay website-kaaga.
Spam gudbinta been abuurka ah ayaa saameyn ku samaysay bogagga ilaa 2015 - fix laptop san francisco. Si kastaba ha ahaatee, Sharebutton Google Analytics waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah mareegaha waayeelka ah ee wali sii wata xogta GA ee ku jira suuq-geynta suuq-geynta
Sida laga soo xiganayo, Sharebutton bartilmaameedka spam ee tooska ah ee saameeya xisaabaha GA si toos ah. Si aad ula socotid dareenka dadka isticmaala internetka, spammers and attackers ayaa isticmaalaya jaangooyooyin sida erayga muhiimka ah, booqdayaasha, qiimaha boogaha, bogagga been abuurka ah, iyo ciribtirka gaadiidka bogga iyo isku xirnaanta boggaga internetka.
Haddii aad dhawaan ogaatay in inta badan gaadiidkaagu uu ka yimaado Sharafutton gudbinta spam, tixgeli ka shaqeynta sida loo ciribtiro spam Analytics sida aad horeyba uheli lahayd spamer. Sida laga soo xigtay khubarada SEO, Sharebutton waxay galaan internetka iyagoo adeegsanaya ereyada URL-yada la beddelay sida badhanka iyo wadaagista.
Inaad ogaato in Sharebutton Google Analytics spam uu ka ciyaaro qeyb ka mid ah taraafikadaada, Andrew Dyhan, khabiir sare oo ka socda Semalt , wuxuu kula talinayaa inuu nuqul cinwaanka cinwaanka ah ee spam u gudbinta iyo ku dhejiyo cinwaanka cinwaanka si aad u ogaato meesha ay ku yaalaan website-ka.
Sidee ayuu spam Sharaputton u shaqeeyaa
Sharebutton ma saameyneyso qiimeynta bogga si kasta. Spam Google Analytics waxa ay ka shaqeysaa wadista gaadiidka wadayaasha iyo boggooda internetka. Si kastaba ha ahaatee, looma oggola in la raadiyo jidka ama furo Sharebutton.to qoraallada sida spam gudbinta been abuur ah waxaa ka mid ah codsiyada xaasidnimo ah ee ku dhajin kara cayayaanka iyo hanjabaadaha khatarta ah ee aad website.
Furitaanka qoraallada Sharebutton.to waxay ku dhammaan doonaan siinta fursad ay ku helaan kombiyuutarada kuwaas oo si sahlan u gali kara xisaabaadkaaga macaamiisha warbaahinta bulshada, xisaabta, iyo aqoonsiyada maaliyadeed ee kale.
Sida loo xakameeyo sharebutton.waxaad u dirtaa spam gudbinta warbixinnadaaga GA
Nidaamka 1. Beddel qaababka sifooyinkaaga filter
Ka bilow xisaabtaada GA kadibna riix 'qaybta'
Xulo 'Dhamaan Filters' icon una abuur fure cusub.
Fur 'Sanduuqa Fadlan' sanduuqyada 'Sharebutton.to'
Samee 'Custom Filter' nooca fiiladaada aadna dooratid 'Ololaha Hawlaha' ee ka yimid 'Filter Field' menu
Riix 'Field Pattern' garoonka, galaan Sharafutton Google Analytics spam, oo guji badhanka 'Key'
Nidaamka 2. Beddel goobahaaga HTTP
Furan xisaabtaada cpanel iyo login.
Selec 'Maamulaha Waraaqaha' oo riix 'Root Document' ee goobtaada
Ku dhufo 'Show Show Files' oo aad dooratid 'Go.'
Ka dib markaad heleysid faylka faylka faylka ah, fadlan guji midigna ku dheji 'Code Edit' oo guji 'Save.'
Nidaamka 3. Beddel xayeesiinta luqadda GA
Gali koontada Google Analytics oo aad dooratid 'Admin Tab.'
Fur 'icon' oo ku dar filim cusub
Nooca 'Spam Language' oo ku qoran sanduuqa magaca.
Riix icon 'Fiiri Filter' icon oo ku dhufo 'Key Save'
Qodobada kor ku xusan waxay ka shaqeeyaan dhammaan meeraha gudbinta sida Sharebutton Google Analytics spam. Helitaanka tirakoobyo cad oo sax ah adoo ka reebaya Sharebutton tixraac ah adoo baddelaya qaabka sifaha, HTTP goobaha, iyo baddelida fiiladaada luqadda. Ha sugin ilaa intaad kumbuyuutarku bilaabeyso inuu hoos u dhaco